Q.M oo billowday daad guraynta Qaxooti Soomaaliyeed oo ku xayirnaa Yemen. – Hornafrik Media Network
Q.M oo billowday daad guraynta Qaxooti Soomaaliyeed oo ku xayirnaa Yemen.
By HornAfrik	 On Jul 19, 2017
Hay’adda Qaramadda Midoobay u qaabilsan Muhaajiriinta ayaa sheegtay inay u fududaysay 316 Qaxooti Soomaali ah oo ku sugnaa Yemen inay ku laabtaan Dalkoodii. Waxayna hawshan daad guraynta Qaxootiga socotay 4 tii Maalmood ee la soo dhaafay.
International Organization for Migration (IOM) Waxay sheegtay in Dooni siday Tahriibayaal tiradoodu gaaraysay 150 Soomaali ah oo rajaynayay inay gaaraan Yurub lagu duqeeyay Biyaha Badda Cas, halkaas oo qaar badan oo kamida Muhaajiriinta ay ku geeriyoodeen Bishii february. Waxaana Duqayntan oo ka dhacday Koonfurta Yemen gaar ahaan meel u 40 qof, halka 13 kalana ay ku dhaawacmeen.
“IOM waxay soo qaaday 100 ka mida Dadkii ka badbaaday Doonidaasi, kuwaasoo laga soo safriyay Xudaydah, kadibna la keenay Sanca, Waxayna si nabad ah ku soo mareen Dhulka ay Dagaaladdu ka socdaan ee Yemen,” Sidaasna waxaa lagu sheegay Warsaxaafadeed ay soo saartay IOM.
IOM waxay intaas ku dartay 3 Bus, iyo Ambulance ay ka soo baxeen Sanca 12-kii Bisha, si ay u keenaan Muhaajiriinta Soomaalida ah Cadan, halkaas oo Shaqaalaha IOM ay diyaar ugu ahaayeen inay kula wareegaan. Waxaana kadib Habeeno Nasasho ah Muhaajiriintan laga soo saaray Dooni Cadan, taasoo 14 Saacadood kaga soo gudubtay Biyaha Carbeed, dabeetana waxay 14-kii Bisha soo gaareen Dekadda Berbera, iyagoo ka koobnaa 57 Nin, 25 Haween ah, 5 Wiil, iyo 3 Gabdhood.
Qaramadda Midoobay waxay sidoo kale sheegtay in Koox kale oo Muhaajiriin ah ay Cadan ka soo tageen Sabtidii, kuwaasoo ka koobnaa 103 qof oo 23 ka mida ay Rag yihiin, 22 Haween, 30 Wiil, iyo 28 Gabdhood.
“si aan u xaqiijino bad qabka iyo Dib u Celinta Qaxootigan waxaa Soomaaliya ku soo dhaweeyay Hawlwadeenadda IOM, waxaan sidoo kale qorshaynaynaa Qaybtii 3-aad ee Muhaajiriin ka kooban 100 Qof oo u badan Qoysas Caruur wata inaan ka soo qaadno Talaadada Dekadda Cadan,” ayaa lagu yiri Qoraal ay soo saartay IOM.
IOM waxay sheegtay in Hawlaha noocan ah oo ay gacan ka siiso Hay’adda Qaxootiga Qaramadda Midoobay ee UNHCR ay ku guulaysteen 6-dii Billood ee la soo dhaafay inay ku caawiyaan 1,306 Soomaali ah oo Dalkoodii dib loogu celiyay.
Xog: Xasan Sh oo abaabul Siyaasadeed ka dhan ah Dawladda ka billaabay Tanzania. +Sawiro
Xog: Maxaad ka ogtahay Ballanqaadka loo sameeyay Xildhibaan Goodax Barre,?